यी खानेकुरा एकैसाथ मिसाएर नखानुहोस् , शरीरका लागि छन् खतरनाक !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी खानेकुरा एकैसाथ मिसाएर नखानुहोस् , शरीरका लागि छन् खतरनाक !!
दही, पनिर र योगर्टजस्ता खानेकुरा चिसोमा खाँदा निकै फाइदाजनक हुन्छ । तर यस्ता खानेकुरा राती भने खानुहुँदैन । दही इन्फ्लेमेशन र रगत, पित्त, कफसँग सम्बन्धित समस्यालाई ट्रिगर गर्नसक्छ । जसको पाचन क्रिया खराब छ उनीहरुलाई पनिरले कब्जियतको समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसै गरी महलाई कहिल्यै पनि तताएर खानु हुँदैन । यसले हाम्रो पाचन क्रियालाई सहयोग पुर्याउने एन्जाइम्स मार्नसक्छ । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 49 = 58